Shaxda uu xulka Brazil beri kala hortagayo Argentina oo daaha laga rogay – Gool FM
(Brazil) 08 Juunyo 2017. Xulka Brazil ayaa beri kulan saaxiibtinimo oo aan xilaaftan ka marneyn la yeelan doona xulka ay sida wayn u coltamaan ee Argentina.
Waxaa daaha laga rogay safka uu xulka Samba kala hortagi doono Messi iyo xulafadiisa.
Neymar ayaa kulankan ka maqan maadaama fasax dheeri ah la siiyay waxaase markii ugu horreyay safka koobaad ku soo bilwoday labo sano kaddib daafaca PSG Thiago Silva oo berito kabtanka u xiran doona xulkiisa.
Weerarka waxaa jooga da’yarka Man City ee Gabriel Jesus oo ay geesaha ka soo caawin doonaan wiilasha farta ka xiran ee Willian iyo Philippe Coutinho.
Brazil ayaa ku soo gali doonta berito shaxda 4-1-4-1.
Nin Afrikaan ah oo u jawaabay Daily Mail xili ay dhaleeceyn u jeedisay xulka qaranka sucuudiga